Hay’ada Conflict Early Warning Mechanism (CEWARN) oo ah Hay’ada ka Digta Colaadaha ka dhaca Xuduudaha Wadamada Xubnaha ka ah IGAD ayaa waxay ugu Deeqdey Hay’ada Somalia CEWERU oo ah iyana Hay’ad ka digta Colaadaha isla Qalab isugu jira 7 Computers iyo 7 Printers. Qalabkaan waxaa kaloo la socda 7 Fax Machine kuwaas oo dib looga keeni doono.
Qalabkaan ayaa waxaa loogu tala galey in ay isticmaalan Gudiyada Nabada ee Somalia CEWERU kuwaas oo ka dhisan Degmooyinka Xuduuda ku yaalo ee kala ah Baled-Xaawa, Doolow, Luuq, Ceel-Waaq, Badhadhe, Hagar iyo Dhoobley. Gudiyadan oo ah kuwa ka hortaga kana Jawaaba Coloodaha ka dhaca Xuduudaha kuwaas oo ay sababaan Dadka Xoolaleyda ah ee isaga Gudba Xuduudaha.
Agaasimaha Waaxda Afrika ee Wasaarada Arimaha dibada oo magaca Somalia CEWERU kula wareegey Qalabkaas ayaa ka Mahadceliyey Deeqdan wuxuuna sheegey in ay kor u qaadi doonto sidii Xog Ururinta laga sameenayo dhacdooyinka la xiriira Colaadaha ka dhaco Degmooyinkaas lagu soo gaarsiin karo Xarunta Somalia CEWERU ee Muqdishu iyo Hay’ada CEWARN si ka hortag loogu sameeyo.
“Waa Talaabo Hordhac u ah Waxqabad badan oo aan ka fileyno Hay’ada CEWARN oo aan ka wada shaqeyno sidii loogu hortagi lahaa Colaadaha isla markaasna loogu Jawaabi lahaa”ayuu yiri Agaasimaha waaxda Afrika ee wasarada Arrimaha Dibadda .
Waxaa sidoo kale ka Hadley ku Simaha Hay’ada CEWARN oo sheegey in Qalabkan uu qayb ka yahay Qalab loo isticmaalo sidii Xogta loo Ururin lahaa waxaana Daba socda Qalab kale oo ah Isgaarsiin loogu tala galey in Xogta si Dhaqsiyaha ah lagu gaarsiiyo Hay’adaha ka Jawaabeysa.
Madaxa hay’ada CEWARN Richard Barno wuxuu ka Mahadceliyey sidii loogu soo dhaweeyey Magaalada Muqdishu wuxuuna sheegey in uu mar kale Booqosho rasmi ah ku imaan doono Soomaliya si Qorshaha labada Sano ee Somalia CEWERU u noqon lahayd mid sidii loogu tala galey loo hirgeliyo.
Wafidga CEWARN oo Maalmahaan Muqdishu ku sugnaa ayaa waxyaabaha ay u yimaadeen ka mid ah in ay bandhigis ku sameeyaan Mashruuc lagu Magacaabo Rapid Respond Fund oo ah Mashruuca Dhaqaalaha loogu jawaabayo Colaadaha degdega ah wuxuu Mashruucaas wixii had aka Dambeeya uu fursad u siinaya Hay’adaha ka shaqeeya Nabada ee Somalia in ay xaq u yeelanayaan in ay Dalbadaan Dhaqaalahaas si ay wax uga qabtaan Mashaariic Nabada wax loogu qabanaayo.